तपाईंको सामग्री बदबू आउँछ किनकि यसले यी तत्वहरूलाई हराइरहेको छ Martech Zone
बुधबार, सेप्टेम्बर 9, 2015 बुधबार, सेप्टेम्बर 9, 2015 Douglas Karr
रिपोर्ट पछि उद्योग रिपोर्ट हाइपर प्रासंगिकता र निजीकरण रूपान्तरण दर वृद्धि गर्न निरपेक्ष कुञ्जी हो कि तथ्यलाई पुर्याउन जारी छ। त्यसोभए किन सामग्री बजारहरूले सामान्य ड्राइभ लेख्न जारी राख्छ जुन सबैको ड्राईवल जस्तो छ? गएको रात मैले स्थानीयमा एउटा प्रस्तुतीकरण गरें झिल्काहरू घटना र मैले यो भनिन्छ:
तपाईंको सामग्री बेकार छ। ठ्याक्कै मन पराउनुहोस् तपाइँ यो गर्न चाहानुहुन्छ।
प्रस्तुतीकरणको साथ मेरो कुरा भनेको सामग्री लेख्ने क्षमताको अपमान गर्नु होइन; यो तिनीहरूको क्षमता आलोचना थियो तिनीहरूको दर्शकहरूको लागि सामग्री लेख्नुहोस्। हामी जहिले पनि सामग्री लेख्न फिर्ता झर्ने गर्छौं हामी विश्वास गर्छौ महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो हाम्रो समग्र दर्शकहरूको अंशमा मात्र जोडिरहेको छ।
हाम्रो समस्या यो छ कि हाम्रो दर्शक विविध छ। उस्तै डेमोग्राफिक्सको साथ दुई संभावनाहरू तपाईंको कम्पनीसँग सम्बन्ध बढाउनको लागि धेरै फरक प्रक्रियाहरू हुनेछन्। हामी त्यसलाई ध्यानमा राख्दैनौं।
E तत्वहरू तपाईंको सामग्री वृद्धि गर्न
अनुभूति बढाउनुहोस् - इमेजरी, अडियो, वा भिडियो थपेर तपाईं लेख र लेख को प्रभाव र मान्यता वृद्धि हुनेछ।
साझेदारी योग्य बनाउनुहोस् - पाठकको मान निर्माण गर्न अनुकूलन सामग्री यदि उनीहरूले यसलाई साझा गर्छन् भने यो एक अचम्मको रणनीति हो। पाठकहरूलाई तिनीहरूको नेटवर्क बढाउन मद्दत गर्नुहोस्, पाठकहरूलाई उनीहरूको पहिचान प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्नुहोस्, पाठकहरूलाई उनीहरूको समुदायमा सामग्री साझेदारी गर्नमा सामेल हुन मद्दत गर्नुहोस्, वा उनीहरूले साझा गर्ने कारणका बारे उनीहरूलाई बताउनेछन् किनकि उनीहरूले ख्याल राख्छन्।
समर्थन निर्णयहरू - केहि पाठकहरु विश्वास, तथ्यहरु, दक्षता, यसको संयोजन को भावना बाट प्रभावित छ। सन्तुलित सामग्री जसले यी सबै तत्वहरू समावेश गर्दछ अधिक पाठकहरूको साथ कनेक्ट हुनेछ।
मनाउने कार्य - ड्राइभ ड्राइभ सामग्री समावेश गर्नुहोस् मनाउने - लिinking्क गर्ने, पारस्परिक व्यवहार, सहमति, अभाव, स्थिरता, र अधिकार।
निजीकृत गर्नुहोस् - जब मानिसहरू आउँछन् वा काम छोड्छन् उनीहरूको जीवन अन र अफ हुँदैन। व्यापार खरीदहरू साथीहरू, परिवार, र हाम्रो व्यक्तिगत विकासबाट प्रभावित छन्। व्यक्तिगत खरीदहरू तपाईंको कामले प्रभाव पार्छन्। एक कार खरीद, उदाहरण को लागी, लामो यात्रा को लागी ग्यास माइलेज का चिन्ता द्वारा प्रभावित गर्न सकिन्छ।
विन्दुमा, हामीले हिजो एक ई-वाणिज्य कम्पनीको साथ समीक्षा गर्यौं। तिनीहरूसँग अविश्वसनीय ग्राहक अवधारण र उच्च रूपान्तरण दरहरू छन्, तर समयको साथ तिनीहरूसँग नयाँ ग्राहकहरू प्राप्त गर्न गाह्रो भयो। जब हामी उनीहरूसँग कुराकानी गर्थ्यौं, उनीहरूले हामीलाई पहिलो कुरा भनेका थिए उनीहरूको कम्पनी कत्तिको अनौंठो थियो। तिनीहरू १००% अमेरिकी आधारित थिए। उनीहरूका उत्पाद सामग्रीहरू प्रायः अमेरिकी निर्मित थिए (केहि सामग्री यहाँ प्राप्त गर्न सकिदैन)। तिनीहरूले हरेक कलको लागि आफ्नो फोनहरूको उत्तर दिए। र उनीहरूले आफ्नो गोदाम १००% सौर्य शक्तिले सञ्चालन गर्छन्!
मैले महसुस गरें यो एक चरम परिदृश्य हो, तर उनीहरूको कम्पनीको बारेमा उनीहरूले गर्व गरेका सबै कुरा गाह्रो वा लगभग असम्भव थियो उनीहरूको वेबसाइटमा फेला पार्न। के हुन्छ यदि हामीले निम्नसँग तिनीहरूको सामग्री परिवर्तन गर्यौं:
एक जोड्नुहोस् छवि सुविधा को लागी ती साइट मा पुगे पछि चाँडै आगन्तुक लाई असर गर्न।
साझा गर्नुहोस् समाचार ऊर्जा स्वतन्त्रता मा। सामाजिक र वातावरणीय दायित्व एक कारण हो जुन धेरै पाठकहरूले साझा गर्नेछन्।
उद्योग तथ्या ,्कहरू, इन्फोग्राफिक्स, ह्वाइटपेपरहरू, प्रशंसापत्र, र केस स्टडीहरू आगंतुकहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन मद्दत गर्नुहोस्। निर्णय.
ग्राहकसँग पहिले नै केहि प्रारम्भिक निःशुल्क शिपिंग र छुट प्रस्तावहरू छन्। सायद केहि म्याद सकिने मिति थपेमा प्रस्ताव बनाएर व्यक्तिलाई मनाउन सक्छ दुर्लभ.
यी मानिसहरू भावुक थिए! कम्पनीको इतिहास, अद्भुत ग्राहक सेवा, र केही कर्मचारीहरूका अनौंठो प्रोफाइलमा क्यापिटल भिडियोहरू किन समावेश गर्दैनन्? जडान गर्दै व्यक्तिगत दर्शकहरु संग रूपान्तरण ड्राइभ हुनेछ।
फेरि, के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ तपाइँको उत्पादन वा सेवा को लागी महत्वपूर्ण छ कि तपाइँको ग्राहक को विश्वास महत्वपूर्ण छ कि छैन। हाम्रो एजेन्सी सामान्यतया रूपान्तरणमा केन्द्रित हुन्छ। तर कहिलेकाँही ग्राहकहरू हामी प्रदान गर्ने सामग्रीको गुणस्तरमा बढी चासो राख्छन्। त्यो त्यस्तो चीज हो जुन हामीले हाम्रो कम्पनीको प्रमोट गर्ने सामग्री लेख्दा दिमागमा राख्नुपर्दछ!
टैग: संज्ञानिर्णय लिनेनिजीकरणमनाउनेसाझेदारी
भीडभाड संसारमा व्यक्तिगत बनाउने